Aiza no ahafahako mameno ny fiarako?
Ao an-trano amin'ny garazy / lalan-kely, na amin'ny toeram-piantsonana voatondro / toeram-piantsonana iraisana (mahazatra ho an'ny trano).
Any am-piasana ao amin'ny toeram-piantsonan'ny fiaran'ny biraonao, na voatokana na (semi) ho an'ny daholobe.
Amin'ny besinimaro eny amin'ny arabe, amin'ny làlambe, ary amin'ny toeram-piantsonan'ny besinimaro azonao eritreretina - ohatra ny toeram-pivarotana, trano fisakafoanana, hotely, hopitaly sns. Na mahazo fidirana amin'ny tobim-piantsenana rehetra aza ianao dia miankina amin'ny fifandraisan'ny karatra fiampanganao. Raha «activité interoperabilité» no ampandehanana dia azonao atao ny mampandoa vola amin'ny mpanome onjam-bola isan-karazany.
Maharitra hafiriana ny fiantohana ny fiarako?
Miovaova ny ora famaritana arakaraky ny: ny haavon'ny fihenan'ny baterinao ankehitriny, ny fahaizan'ny baterinao, ny fahaizanao sy ny fikirakirana ny tobin'ny mpamatsy vola anao, ary koa ny fahaizan'ny loharanon-karena angovo misy anao (ohatra: an-trano izany na trano misy birao).
Ny hybrides plug-in dia mitaky 1-4 ora vao voadidy feno, fa ny fiara mandeha amin'ny herinaratra kosa mila 4-8 ora (0 ka hatramin'ny 100%). Amin'ny salan'isa, ny fiara dia mijanona ao an-trano hatramin'ny 14 ora isan'andro, ary any am-piasana mandritra ny 8 ora isan'andro. Miaraka amina tobim-piantsonana famatsiam-bola eo am-pelatananao, io fotoana rehetra io dia azo ampiasaina hanatsarana ny fiaranao hatramin'ny 100%.
Fivoahan'ny herinaratra tsy tapaka: Tandremo raha toa ka mamoaka ny EV avy amina toeram-pivoahana herinaratra mahazatra ianao. Ny famoahana an-trano dia mitaky tariby famerana manokana izay manakana ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny hafanana be loatra. Ho fanampin'izay, ianao koa dia mila maka antoka fa eo akaiky ny fiara ny fivoahana, satria mety tsy hampiasa tariby fanitarana mihitsy ianao hamoahana ny fiaranao. Na eo aza ireo fitandremana ireo, ny famoahana entana avy amin'ny fivoahana mahazatra dia tena kivy, satria ny ankamaroan'ny trano fonenana dia tsy tariby hitondra taratra elektrika avo lenta. Miankina amin'ny firenena misy anao ny ora famandrihana. Ho an'ny EV miaraka amin'ny 160 km dia azonao atao ny manantena ny ora fiampangana manodidina ny 6-8 ora any Eropa.
Fiantsonan'ny fiampangana EV: Ity no fomba fanolorana fiara be indrindra, satria io dia azo antoka sy mahomby amin'ny fampiasana ny fiara sy ny angovo loharano (ohatra trano na birao). Miaraka amina tobim-piantsenana miasa eo am-pelatananao, isaky ny mahatratra ny arabe ianao dia azo antoka fa manana fiara feno feno farafahakeliny. Ny tobim-piantsonana iray dia afaka mandoa hatramin'ny 8 heny haingana kokoa noho ny fivarotana mahazatra. Midika izany fa izay EV rehetra dia homena 100% ao anatin'ny 1-4 ora. Mitadiava topy maso ny fotoana famahanana ho an'ny bateria mahazatra indrindra eto.
Toeram-piaramanidina haingana: Miorina matetika ivelan'ny tanàna sy amin'ny làlambe ny gara mijanona haingana. Na eo aza ny haingam-pandeha (miakatra 20-30 minitra izy), ny charger de moyenne haingana dia 80% ihany no mitondra EV mandritra ny session iray famahana. Noho ny fitaovana lafo vidy sy ny kojakoja fiantsonan'ny fikirakirana haingana, dia matetika no mividy sy manangana isaky ny fangatahana ataon'ny governemanta eo an-toerana ireo charger ireo.
Inona no karazana fiantsonan'ny fiampangana tokony hapetrako?
Misy karazana gara fiampangana marobe - ao anatin'izany ny haavo 1, haavo 2 ary ny famahanana haingana DC - noho izany ny iray izay hofidinao dia hiankina amin'ny lafin-javatra maro. Anisan'izany ny tranga fampiasan'ny mpanjifa antenaina, ny vidiny ary ny fiheverana ny famolavolana tranonkala.
Inona avy ireo antony famolavolana tranokala misy fiatraikany amin'ny vidin'ny fametrahana?
Ny frais amin'ny fametrahana ny tobin-tsolika dia mety mihoatra ny vidin'ny fitaovana ary entina amin'ny endrika famolavolana maro izay tokony hodinihina toy ny:
Serivisy elektrika misy izao. Ny fametrahana ny tobin-tsolika vaovao rehetra dia tokony hisy fandalinana enta-mavesatra amin'ny fangatahana herinaratra ao amin'ilay fotodrafitrasa hamaritana raha misy ny fahaizana manampy ireo tobin-tsolika EV. Ny gara AC Level 2 dia mila faritra 240-volt (40 amp) manokana ary mety ilaina ny fanatsarana ny serivisy elektrika.
Ny elanelana misy eo amin'ny tontonana elektrika sy ny tobin-tsolika. Ny elanelana lavitra eo anelanelan'ny tontonana elektrika sy ny tobin'ny fiantsorohana EV dia midika ho lafo kokoa ny vidin'ny fametrahana satria mampitombo ny habetsaky ny fantsakana (sy ny fanamboarana), ny lakandrano ary ny tariby. Ilaina ny mampihena ny elanelana misy eo amin'ny tontonana elektrika sy ny tobim-pamoahana EV arak'izay azo atao raha sady dinihina koa ny toerana misy ny toby fiampangana eo amin'ilay trano.
Toeram-piantsonan'ny fiampangana amin'ny trano. Diniho ny fiantraikan'ny fametrahana ny gara amin'ny toerana manokana amin'ny trano. Ohatra, ny fametrahana ny toeran'ny tobim-piantsonana famerenana ao ambadiky ny tranobe iray dia mety hanakivy ny fampiasan'izy ireo, saingy mety ho sosotra ny mpanjifa hafa raha toa ka napetraka ao amin'ny toeram-piantsonana voalohany ny biraom-piantsonana izay matetika foana no foana satria vitsy ny mpamily EV.
Ny fiheverana hafa dia tsy misy akony firy amin'ny vidin'ny fametrahana saingy mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny gara amin'ny tombotsoan'ny mpamily EV sy ny mpanjifa hafa. Ny sasany amin'ireny dia misy ny làlan'ny tadin'ny famandrihana rehefa ampiasaina sy fomba fitantanana fitobiana.
Azoko atao ve ny manefa vola amin'ny olona amin'ny fampiasako ny tobin-kaja famerenako?
Eny, avela hitory vola amin'ny olona ianao amin'ny fampiasany ny tobin-tsainao na dia maro aza ireo tompona gara no misafidy ny hanome vola maimaim-poana ho fitaomana na tombontsoa ho anao. Ohatra iray amin'izany ny mpampiasa manome fanomezana maimaimpoana ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifany. Raha manapa-kevitra ny handoa vola amin'ny fampiasana ianao dia misy antony maromaro tokony hodinihina amin'ny famaritana izay mety indrindra aminao.
Ny famandrihana ho an'ny fampiasana dia miankina amin'ny toerana. Ny fanapahan-kevitrao dia hiankina amin'ny toerana iasany. Any amin'ny faritra sasany amin'ny fanjakan'ny New York, indrindra any amin'ireo tanàn-dehibe kokoa, ny garazy sasany miantsoroka ny fijanonana dia mety hahita ny mpanjifa izay vonona handoa vola fanampiny amin'ny fiampangana ara-dalàna an'i EV satria tsy manam-bola amin'ny trano fonenany izy ireo.
Ny famandrihana ho an'ny fampiasana dia miankina amin'ny tanjon'ny fametrahana ny tranokala. Ny tombom-barotra ateraky ny fiantsonana dia tsy ny hany fotoana ahafahana miteraka famerenam-bola amin'ny famatsiana. Ny tobim-piantsonana dia mety hahasarika ireo mpamily EV izay manohana ny orinasanao, mitazona mpiasa sarobidy, na manome ny fahatsapana ny fitantanananao ny tontolo iainana izay mety hanintona ny mponina sy ny mpiasa EV na ireo tsy EV.
Ahoana ny fomba fiasa miasa. Ny tompon'ny gara dia afaka mandoa vola amin'ny fampiasana isan'ora, isaky ny fotoam-pivoriana, na isaky ny herinaratra.
Isaky ny ora: Raha andoavanao isan'ora dia misy vidiny voatondro ho an'ny fiara rehetra na mandeha izany na tsia, ary ny fiara samy hafa dia mahazo herinaratra amin'ny vidiny samihafa, noho izany ny vidin'ny angovo dia mety miovaova arakaraka ny famandrihana session.
Isaky ny fivoriana: Matetika izy io dia mety kokoa amin'ny famandrihana na fiantsonan'ny mpikirakira izay misy fotoana fohy sy fohy.
Isaky ny angovo (matetika kilowatt-hour [kWh]): Ity dia mitaky ny tena vidin'ny herinaratra ho an'ny tompon'ny toby fiantsenana, nefa tsy manome fanentanana ho an'ny fiara iray izay voaloa tanteraka handao ilay toerana
Ny tompona tranokala sasany dia nanandrana nitambatra tamin'ireto fomba fiasa ireto, toy ny fanefana ny tahan'ny fisaka mandritra ny adiny roa voalohany, avy eo ny tahan'ny fiakarana ho an'ny fotoana lava kokoa. Ny toerana sasany dia mety aleony mampihena ny vola lany amin'ny fandidiana raha tsy miditra amin'ny tambajotram-pifandraisana ary manome maimaim-poana.
Fa maninona no zava-dehibe tokoa ny fanefana entana any am-piasana?
Satria maro ny olona mandeha miasa ary ny mpamily EV dia te-hanadidy ny andraikiny isaky ny azo atao ny manolotra vola any am-piasana dia tombony ho an'ny mpiasa lehibe hatolotry ny mpampiasa. Raha ny marina, ny fakana vola any am-piasana dia mety mihoatra ny isan'isany amin'ny mpiasa elektronika isan'andro isan'andro. Ho an'ny mpampiasa, ny famandrihana amin'ny toeran'ny toeram-piasana dia afaka manampy amin'ny fisarihana sy fitazonana mpiasa miasa farany ary mampiseho ny fitarihana amin'ny fampiasana teknolojia angovo madio.
Brochure famahana ny asa any NYSERDA [PDF] manome topy maso momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fametrahana tobin-kazo any amin'ny toeram-piasana sy torolàlana amin'ny fizotran'ny drafitra, fametrahana, ary fitantanana fotodrafitrasa famandrihana EV.
Ny departemantan'ny angovo Fiampangana ny toeram-piasana tranonkala dia manome torolàlana amin'ny fandraisana mpiasa mba hanararaotra an'ity tombontsoa ity, ary koa ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fanombanana, ny drafitra ho an'ny, fametrahana ary ny fitantanana ny fiampangana eo amin'ny toeram-piasana
Inona avy ireo toby fiampangana haingana DC?
Ny famandrihana haingana DC dia mampiasa famindrana angovo mivantana (DC) mivantana ary fidirana 480-volt mifandimby (AC) mba hanomezana famerenam-bola haingana be any amin'ireo toerana be mpampiasa. Miankina amin'ny EV, ny tobim-piantsenana haingam-pandeha DC dia afaka manome recharge 80% ao anatin'ny 20 minitra. Ny hafainganam-pandeha dia miankina amin'ny haben'ny batterin'ny fiara sy ny fikirakirana fitaovana, fa maro ny EV ankehitriny no afaka miakatra mihoatra ny 100 kW (mihoatra ny 100 kilaometatra ny elanelana ao anatin'ny 20 minitra). Ny famahana haingana DC dia safidy voalohany indrindra ho an'ny rehetra-elektrika fiara. Vitsy ireo plug-in hybrid EVs afaka mampiasa charger DC haingana. Misy mpampitohy telo lehibe ho an'ny charger DC haingana; Ny EV izay afaka mampiasa DC dia tsy mifanaraka afa-tsy amin'ny iray amin'ireto:
SAE Combined Charging System (CCS) dia fenitra fiampangana eken'ny besinimaro ampiasain'ny ankamaroan'ny fiara
CHAdeMO dia fenitra mahazatra mahazatra indrindra ampiasain'i Nissan sy Mistubishi
Tambajotra Supercharger an'i Tesla dia mifototra amin'ny teknolojia famahanana tompony izay tsy ampiasain'ny fiaran'i Tesla irery
Orinasa miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina maromaro no manangana tobim-piantsenana misimisy kokoa any amin'ny fanjakan'ny New York sy ny sisa, ao anatin'izany ny New York Power Authority, Electrify America, EVgo, ChargePoint, Greenlots, sy maro hafa.